UPHI U-CROWN OWENZIWE? ISIKHOKELO KWIINDAWO NGEDRAMA YENETFLIX- IRADIO TIMES - UKUHAMBA
Ixesha lesithsaba 1: Yayifowunelwa phi?
Xa iNetflix iseti malunga nokwenza isithsaba, isicwangciso sokuqala yayikukwakha uninzi lweeseti zestudiyo. Nangona kunjalo, iqela ngokukhawuleza laqonda ukuba ngekhe likwazi ukwakha umhlaba omangalisayo uKumkanikazi ahlala kuwo kwasekuqaleni.
UHLAZIYO: Funda ngakumbi malunga nokuba isithsaba sithwetshulwe phi kwisikhokelo sethu sendawo se-2020
Endaweni yokuba i-cast kunye ne-crew bangene kumakhaya amahle kunye neecawa zaseNgilani. Yonke indawo ojonga kuyo, zonke iinkcukacha, andicingi ukuba singaze siyifumane loo nto, uyachaza umvelisi olawulayo uSuzanne Mackie.
Into emnandi xa unesikali esingaqhelekanga, ubuhle kunye nobungangamsha, kunye nento eyoyikisayo, emva koko ubeke omnye wabalinganiswa bethu, bebodwa mhlawumbi, kwigumbi likarhulumente elikhulu, kwaye ngequbuliso loo mfanekiso ungathetha kakhulu sizama ukuthi.
Nazi iindawo ezisibhozo zeendawo eziphambili, ukusuka kwi-cathedral yaseCambridgeshire ukuya kwinqaba le-clifftop e-Aberdeenshire.
1. ILancaster House
Ngaphandle kweNetflix ayinakuthenga indlela yayo kwiBuckingham Palace, uninzi lwezo ndawo zafotwa eLancaster House endaweni yoko. Le ndlu yedolophu ihonjiswe ngobunewunewu yinto nje yokuphosa ilitye kude neBuckingham Palace ePall Mall.
Eyakhelwe kwiminyaka ye-1820, yayisaziwa njengeYork House kuba yayithunywe yiGrand Old Duke yaseYork. Kuyo yonke inkulungwane ye-19, yayiliziko lezopolitiko kunye noluntu oluphakamileyo. Kuyabonakala ukuba uKumkanikazi uVictoria wayekhe wathetha ngomona kumhlobo wakhe osenyongweni iDuchess yaseSunderland, xa wayehlala apho: Sithandwa sam, ndivela endlwini yam ndisiya ebhotwe lakho.
Kule mihla ilawulwa nguRhulumente kwaye isetyenziselwa kakhulu iinkomfa kunye nokubuka iindwendwe kukarhulumente. Ayidla ngokuvuleleka eluntwini, kodwa ungabhukisha indawo kutyelelo olukhokelwayo.
Ngolwazi oluthe kratya: gov.uk/orhulumente/history/lancaster-house
Fumana iihotele zaseLondon
Sijonga enye yeehotele ezithandwayo zeKumkanikazi kunye noKumkanikazi kaMama
I-Ely Cathedral imele iWestminster Abbey. Yinto yangasemva kumtshato kaKumkanikazi, uCoronation kunye nengxoxo enkulu apho uPhilip athi: Ngaba uyiKumkanikazi yam okanye ngumfazi wam? Kwaye akafuni ukuguqa phambi kukaElizabethe. Kwimiboniso yokuBekwa kukaCoronation, bagcwalisa i-cathedral ngamakhulu ongezelelweyo, abamele amaqela ahlukeneyo omkhosi, i-Commonwealth, kunye nezinye izidwangube zamazwe aphesheya kunye nobukhosi.
Le cahedral inkulu kwisixeko esincinci sase-Ely eCambridgeshire isusela kwinkulungwane ye-7, xa intombi kaKumkani wase-East Anglia, e-Etheldreda, yakha indlu yoonongendi apha. Emva kokubulawa sisibetho, wenziwa ingcwele kunye nabakhenkethi bamandulo bathontelana ukuya kwindawo yakhe engcwele. Umsebenzi kwicawe yangoku yaqala emva koloyiso lukaNorman ngo-1066, xa uNorman Abbot wokuqala wagqiba kwelokuba akhe ngokutsha i-abbey ngomlinganiselo omkhulu.
Kuwo wonke uDisemba, kukho ukhenketho lwemihla ngemihla kwaye iindwendwe nazo zingakhwela kwiOctagon Tower, eyi-170ft-high kwaye ithweswe isithsaba ngomthi odumileyo waseCathedral, ilothe kunye neglasi yeLantern Tower, eyinto yobugcisa yobunjineli bamaxesha aphakathi.
Ngolwazi oluthe kratya: elykhastal.org
Fumana iihotele eEly
3. Ibhotwe lase-Eltham
Le ndlu enesitayile seArt Deco eMzantsi London yayisetyenziselwa izigcawu ezininzi kwisiqendu sesibhozo - njengendawo yokuhlala kweKumkanikazi yeRoyal Yacht Britannia, iBermuda House House, iHMSS Queen Mary. Bakwenza umboniso bhanyabhanya kwiholo yokungena eyakhiwe ngeglasi, eyakhiwe ngeglasi (eboniswe ngezantsi): kulapho uKumkanikazi adibana khona nomyili wefashoni uNorman Hartnell kwisitudiyo sakhe.
Umjelo we-Eltham Palace kunye (ngokufanelekileyo ubizwa ngegama) iholo enkulu ibuyela kumaxesha aphakathi, kodwa yonke indlu yakhiwa ngo-1930. Ngelo xesha uyilo lwalunqamleza: kukho nesicoci sokucoca umoya esifihlwe ezindongeni. Kukho igumbi lokuhlambela ngegolide elihonjiswe ngemibala yegolide kunye neonikisi, kunye neempompo zegolide zokuthambisa kunye nomfanekiso wesithixokazi iPsyche. Kule mihla, ilawulwa liLifa leMveli lesiNgesi.
Yayisetyenziselwa i-yacht kuba umgangatho wokuqala ubonakala ngathi ziikhabhathi kwiinqanawa zokuhamba ngeenqwelomoya ezinama-30s kunye nee-40s - ezakhelwe ngaphakathi, ifanitshala egosogoso kunye nemiphezulu egudileyo.
Ngolwazi oluthe kratya: english-heritage.org.uk
4. Ikholeji yaselwandle yeGreenwich
I-Old Royal Naval College eGreenwich kumazantsi mpuma eLondon yayisetyenziselwa inkundla yaseBuckingham Palace, esiyibonayo kakhulu: ukuza nokuhamba kukaChurchill, uElizabeth etyelele abazali bakhe xa yena noPhilip babehlala eClarence House, amalungu osapho etyelele ukumkanikazi.
Baqala ubomi njengeGreenwich Palace, yenye yezona zigodlo ziphambili zasebukhosini ngalo lonke ixesha leTudor. UHenry VIII, uMary I noElizabeth Ndazalelwa apha bonke, umfazi wesibini kaHenry u-Anne Boleyn wabanjwa apha, kwaye uShakespeare wadlala apha. Izakhiwo zakudala abatyeleli abazibonayo namhlanje yayisisibhedlele iRoyal Hospital seamen, eyakhiwa ngenkulungwane ye-17 ukuhlalisa amagqala omhlala phantsi oMkhosi wamanzi waseBritane. Ukusuka kwi-1873 kude kube yi-1997, yaba yiKholeji yaseRoyal Naval.
I-Old Royal Naval College ikhululekile ukutyelela kwaye ivule yonke imihla. Ngolwazi oluthe kratya: ornc.org
5. IHolo yeengcibi zegolide
Indawo apho igumbi elaliseBuckingham Palace lajika laba yindawo yemidlalo yeqonga okwethutyana kwaye uKing George ususile imiphunga yakhe yafota kwiholo leGoldsmiths, elikwiSixeko, izitalato ezimbalwa kude neSt Paul's. Indawo leyo yenziwa ngokutsha kunye noogqirha bokwenyani abavela kwisibhedlele saseGuy, ababesebenza ngexesha labo lokuphumla ukuqinisekisa ukuba kuyinyani.
Inkampani i-Worshipful Company of Goldsmiths yenye yeenkampani ezilishumi elinambini zeLivery Great Livery zeSixeko saseLondon kwaye yafumana itshata yayo yokuqala yasebukhosini ngo-1327. Le ndawo ibilikomkhulu leNkampani yeeGoldsmiths ukusukela ngonyaka ka-1339, xa abathengisi begolide abali-19 bathenga umhlaba. Le yiholo yesithathu emi apha. Yakhiwa kwii-1800s zakuqala kwaye yaphantse yatshatyalaliswa ngo-1941 xa ibhombu yafika kwikona esemazantsi-ntshona.
IHolo labakhandi begolide alivamise ukuvuleleka eluntwini, kodwa kukho iintsuku ezivulekileyo apho iindwendwe zinokubhalisela ukhenketho olukhokelwa simahla.
Ngolwazi oluthe kratya: zhengcs.co.uk
6. Isikhululo senqwelomoya iShoreham
Esi sikhululo seenqwelomoya esimangalisayo seArt Deco kufutshane neShoreham-by-Sea eWest Sussex sesona sidala eNgilane. Yayisetyenziselwa imiboniso emininzi, kubandakanya ukubuya kukaKumkanikazi evela eMzantsi Afrika emva kokusweleka kukayise, naxa yena, uPhilip noTapsend behamba besiya eMntla Ireland.
Eyasungulwa ngo-1910, iSikhululo senqwelomoya saseShoreham ngoku siyinxalenye yeSikhululo senqwelomoya saseBrighton kwaye sisetyenziswa zizikolo eziphaphayo kunye nabanini babucala beenqwelomoya kunye neenqwelo moya. Akusiyo okokuqala ukuba nenxaxheba yeTV: i-1930s yokwakha i-Art Deco ibonakala kwiindawo ezininzi ze-Agatha Christie kunye neKhowudi ye-Da Vinci.
7. Iinqaba zeSlains
Kwisiqendu sesibhozo, ababukeli baya kuhlola iSlains Castle eAberdeenshire xa uKumkanikazi uMama esiya eScotland ngo-1952. Ima kanye njengenqaba awayeyithengile: Inqaba kaMey kwiCaithness. U-Queen Mother wayibuyisela kwaye wayisebenzisa njengekhaya leeholide kwisiqingatha senkulungwane esilandelayo.
Inqaba yaseSlains yaziwa ngokuba yiNew Slains castle, nangona indala nje: yayakhiwe ngekhulu le-16 nge-9 u-Earl ka-Erroll, iguquka elingumKatolika elalingengomlandeli kaKumkanikazi uElizabeth I. Ihleli phezu kwengxondorha ejonge kuNorth Sea , ikhilomitha ezantsi kunxweme ukusuka kwilali iCruden Bay.
Inqaba yase-Old Slains nayo yayiye-Earl kwaye yayilele malunga neekhilomitha ezintandathu kumzantsi-ntshona. Yavuthelwa ngumpu nguKing James VI emva kokuba u-Errol exhase iyelenqe lokungcatsha umbuso.
Kule mihla iNqaba eNtsha yamaSilaha iyinkangala, ke ubona kuphela izinto zayo zangaphandle kwiCrown (izinto zangaphakathi zeCastle Mey zafota kwenye indawo). Ukuba ukuloo ntamo yehlathi, kufanelekile ukutyelelwa i-vista yedrama yodwa. Unokuhamba ngayo ukusuka kwilali ngokwayo okanye ukusuka kwindawo yokupaka imoto ekufuphi kwi-A975.
8. Mzantsi Afrika
Enye indawo ephambili yayinguMzantsi Afrika, ophindwe kabini njengeKenya kwinxalenye yokuqala yolu thotho. U-Elizabeth noPhilip baya eKenya kukhenketho lwe-Commonwealth kunye neholide emfutshane, endaweni katata wakhe ogulayo. Kulapho afunda khona ngokusweleka kukatata wakhe, kwaye xa esiba nguKumkanikazi.
UMzantsi Afrika ubenendima ephambili kuthotho lwesibini lweThe Crown
Isibonelelo somfundi weRadio Times:
IBuckingham Palace kunye neeGadi, uhambo lokulala ebusuku nge- $ 149
Thatha ukhenketho olukhokelwayo yenye yezona ndawo zinomtsalane ehlabathini - kodwa ezingabonwanga kangako - izitiya. Kolu hambo luxabisekileyo lomqeqeshi uza kutyelela ibhotwe ngokwalo ukubona amagumbi aseburhulumenteni amahle kunye nomboniso weRoyal Gifts - ingqokelela yezipho ezinikwe uHM ukumkanikazi ziinkokheli zehlabathi kule minyaka ingama-65 idlulileyo.
Ukutyelela iRoyal Windsor
Ukwamkelwa kwiBuckingham Palace kunye nomboniso weRoyal Gifts
Ukhokelo lwaseBuckingham Palace Garden
Uhambo olufutshane lokubona indawo eRoyal London
Indawo yokulala ngobusuku obunye kunye nendawo yokuhlala isidlo sakusasa kwilizwekazi kwihotele eneenkwenkwezi ezintathu iSt Giles Hotel, eHeathrow
Buyisela uhambo lomqeqeshi
Ndwendwela indawo yethu yeholide ukufumana iinkcukacha ezithe kratya kunye nokubhukisha
indlela yokwenza umdlalo kwi-roblox
ususa njani ekuqhubekeni ubukele i-netflix
eli lixesha lethu 1 uk
Iinyanga ezi-6 ngoku ukudlula kwetv
umdlalo weetrone kwiAmazon prime
ngubani ose-emmerdale ngokuhlwanje